बेलायतमा “लकडाउन” को घोषणा, के गर्न मिल्छ के गर्न मिल्दैन ? – Karnalikhabar
बेलायतमा “लकडाउन” को घोषणा, के गर्न मिल्छ के गर्न मिल्दैन ?
लन्डन। बेलायतमा कोरोना संक्रमण फैलने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले (लक डाउन) गर्ने घोषणा गरेको छ । सोमबार रातिदेखि नै मानिसहरुको हिंडडुल नियन्त्रण गर्न सरकारले नयां, कडा नियमहरु घोषणा गरेको हो। सोमबार बेलुका टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्दै प्रधानमंत्री बोरिस जोनसनले कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्न नयां नियमहरु घोषणा गरेका हुन् ।
उनले ब्रिटिश जनता अब अत्यावश्यक खाद्यान्न किनमेल गर्न, व्यायाम गर्न, औषधि उपचारको लागि र अत्यावश्यक सेवामा काम गर्ने कर्मचारीमात्र घर बाहिर निस्कन पाउने बताए । ती नियमहरु पालना नगर्ने मानिसहरुलाई दण्ड जरिवाना गर्न र भिडभाड हटाउन प्रहरीलाई अधिकार दिइएको पनि उनले घोषणा गरे । यसैगरी सबै पुस्तकालयहरु, जिम, खेल मैदान, चर्च तथा धार्मिक भेला, विवाह समारोह आदिमा पनि रोक लगाइएको छ तर अन्त्येस्टी समारोहहरु भने आयोजना गर्न पाइनेछ । अत्यावश्यक बाहेकका अन्य पसलहरु पनि बन्द गरिने छन् । उनले सबै जनतालाई घरमै बस्न र सम्भव भएसम्म घरबाटै काम गर्न पनि आग्रह गरे ।
यस अघि गत शुक्रबारदेखि नै सरकारले स्कुलहरु, रेस्टुरेन्ट, पब, बार आदि बन्द गर्न आदेश दिएको थियो । सरकारले ब्रिटिश नागरिकहरुलाई विदेश नजान र छोटो यात्रामा विदेश गएका ब्रिटिश नागरिकहरुलाई पनि जति सक्दो चांडो स्वदेश फर्कन भनेको छ । यसबाट सरकारले छिट्टै हवाई यातायातहरुमा पनि प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । ब्रिटेनमा कोभिड-१९ रोगका कारण मृत्युहुनेहरुको संख्या ३३५ पुग्दै गर्दा प्रधानमंत्री जोनसनले पछिल्लो घोषणा गरेका हुन् ।लण्डननेपाल डटकमबाट
अघिल्लो - पाथीभरा मातालाई दर्शन गर्दै चैत्र ११गते मंगलबारको पूरा राशिफल हेर्नुहोस्
सावधान ! लकडाउन उल्लंघन गरे जरिवान सहित ६ महिना कैद हुनसक्छ - पछिल्लो